अनिताको सबैभन्दा जो''खिम अप्रे'शन सफल हुदै !!! स्वास्थ्य लाभको हर्दिक सुभकामना (सहयोगकाे लागि एक सेयर गराै) - Public 24Khabar
Home News अनिताको सबैभन्दा जो”खिम अप्रे’शन सफल हुदै !!! स्वास्थ्य लाभको हर्दिक सुभकामना (सहयोगकाे...
अनिताको सबैभन्दा जो”खिम अप्रे’शन सफल हुदै !!! स्वास्थ्य लाभको हर्दिक सुभकामना (सहयोगकाे लागि एक सेयर गराै)
विनोद र अनितालाई यतिबेला नचिन्ने कोही पनि छैनन् । श्रीमतीको रेखदेख गर्दैगर्दा अस्पतालकै बेडबाट सबैको मनमा बस्न सफल विनोद एउटा आर्दश श्रीमानको रुपमा चिनिन्छन् ।
झण्डै डेढ वर्षदेखि श्रीमती अनिताको उपचारकालागी विनोदले अस्पतालको बेड कुरेका छन् । लामो समयको उपचारपछि र सबैको आर्शिबाद अनि सहयोगकै कारण अनिताले पनि आ’त्म बल द’ह्रो बनाएर निको हुँदै थिईन् । तर अ:चानक उनको अ:प्रे’सनको खबरले फेरी एक पटक विनोद र उनकी दिदी निराश छन् ।
नेकपाभित्रको विवादमा अध्यक्ष केपी ओलीलाई संकट पर्दा उनले सहयोग गरिरहेका छन् । ‘एक व्यक्ति एक पद’को माग राख्दै प्रधानमन्त्रीबाट ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने कुरा उठ्दा उनले घेराबन्दीमा पारेर नेतृत्वलाई अप्ठ्यारोमा पार्न नहुने मत पार्टीको सचिवालयमा बैठकमा राखेका थिए । नेकपा विवादमा उनको स्पष्ट मत छ, ‘पार्टी विभाजनको अवस्थामा खुल्नुपरे अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई र सरकारबारे निर्णय लिनुपर्ने अवस्थामा ओलीलाई साथ ।’
शनिबार बसेको सचिवालय बैठकमा गृहमन्त्रीसमेत रहेका बादलले संयुक्त प्रस्ताव बनाउनका लागि कार्यदल गठन गर्ने प्रस्ताव अघि सारेका थिए । ‘दुवै अध्यक्षको एक अर्काप्रतिको धारणा आइसकेको अवस्थामा त्यसकै सारअनुसार संयुक्त प्रस्ताव तयार गर्नु चाहिँ उत्तम विकल्प हुनेछ, त्यसका लागि संयुक्त प्रस्ताव बनाउन कार्यदल गठन गरौँ,’ बादलले बैठकमा भनेका थिए ।
स्थायी कमिटी बैठकमा प्रस्ताव नलाने रणनीति बनाएका अध्यक्ष ओलीलाई बल पुग्नेगरी बादलले यो प्रस्ताव अघि सारेका थिए । आफूलाई मद्दत पुग्ने गरी आएको प्रस्तावमा ओलीले सहमति नजाउने कुरै भएन । ‘पार्टीमा बल प्रयोग गर्ने काम बन्द गरौँ । संयुक्त प्रस्तावका लागि कमरेड बामदेव गौतमको अध्यक्षतामा कार्यदल गठन गरेर अघि बढौँ,’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत् गर्दै एक सचिवालय सदस्यले भने ।
बादलको त्यस प्रस्तावमा सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेल र महाचिव विष्णु पौडेलले समेत सहमति जनाएको थिए । ‘बैठकमा कार्यदलको कुरा आएको थियो, त्यसमा प्रधानमन्त्रीसमेत सहमत हुनुहुन्थ्यो । केही साथीहरूले समेत सहमति प्रदान गर्नुभएको थियो,’ सचिवालय सदस्य पौडेलले शिलापत्रसँग भने ।
तर, उपाध्यक्ष गौतमले कार्यदलको कुनै औचित्य नरहेको जवाफ बैठकमा दिए । ‘कार्यदलबाट अब कुनै निष्कर्ष आउँदैन, म यस्ता कार्यदलमा बस्दिनँ,’ गौतमले प्रधानमन्त्रीले कार्यदलको संयोजक बन्न गरेको प्रस्ताव इन्कार गरिदिए ।
उपाध्यक्ष गौतमको भनाइप्रति सहमित जनाउँदै वरिष्ठ नेताद्वय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल पनि कार्यदल बनाउने प्रस्तावको विपक्षमा उभिएका थिए । खनालले पार्टीभित्रको संकट निवारणका लागि पहिले बनाएको कार्यदलका निर्णय पनि लागू नभएको र अब पनि कार्यदल बनायो भने झन अलमल हुन बताएका थिए । ‘पहिला बनाएका कार्यादलले गरेका निर्णय कार्यान्वय भएका छैनन्, अब पनि कार्यदलको के काम ?’ उनले प्रश्न गरेका थिए ।
त्यस्तै, नेता नेपालले पनि खनालको भनाइमा समर्थन जनाएका थिए । उनले पनि अगाडि बनेका कार्यलदलेका सुझाव कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा अब किन कार्यदल बनाउन भनेर प्रश्न गरेका थिए ।
Previous articleयसरी भयो रमेशको साथि जीवनको बिबाह धरानमा हेर्नुहोस Jeevan Bista Ramesh Prasai
Next articleसपनालाई अर्थमन्त्रीले भेट्न नपाउदै NRN ले गर्यो लाखौं नगदसहित भब्य संमान,NRN ले सपनालाई बिश्व घुमाउदै (हिम्मत वालि बहिनिकाे लागि सेयर गराै)